[Tribune] Waa maxay adeegsiga aqooneed Afrikaan ah? - YoungAfrica.com - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » COMPANY [Tribune] Waa maxay adeegsiga aqooneed Afrikaan ah? - YoungAfrica.com
[Tribune] Waa maxay adeegsiga aqooneed Afrikaan ah? - YoungAfrica.com
TELES RELAY 15 October 2019
Marka laga reebo xaalado dhif ah, muuqaalka aqooneed ee Afrika wuxuu caadi ahaan ku dhalaalaa degenaansho aad u badan. Qaaradda, si kastaba ha noqotee, waxay u baahan tahay, in ka badan sidii hore, "la dagaallama" waxgaradka.
Dhowr toddobaad ka hor, gudaha Senegal, gudbinta hubka ee u dhexeeya laba aqoonyahanno caan ah, Boubacar Boris Diop et Souleymane Bachir Diagne, geli shabakadaha bulshada jahwareer. Shayga khilaafaadka wuxuu leeyahay dano qaraabo ah. Intaas waxaa sii dheer, guud ahaan, dadweynaha Senegalese waxay heystaan ​​- si sax ah - tayada isdhaafsiga oo ah shayga khilaafaadka. Laakiin waa in la rumaysto in xaqiiqadu ay aad u yar tahay in warbaahinta qaaradu ay soo gudbiso.
Waa run in, marka laga reebo waxyaabo gaar ah, aragtida aqooneed ee Afrikaanka badanaa waxay ku dhex dhalaalaysaa xasillooni aad u badan. Mucaaradka, ayaa inta badan go’aansaday, kuwaas oo xakameeya nolosha caqliga leh ee daruufaha kale ka jira qaaradda.
"Caqliga dabiiciga ah" iyo qoriyaha
Iskahorimaadka Diop-Diagne wuxuu nagu casuumay inaan wax ka weydiino doorka caqliga ee Afrika. Doodii hore ee meel kale, xaggee, ilaa iyo qaddigii Dreyfus uu dhaliyay soo ifbixinta tiradaasi garaadka, qeyb ka mid ah Antonio Gramsci (falsafad Talyaani, qoraa iyo theorist siyaasadeed ah oo ay xireen xukunkii Mussolini ee 1927 ilaa uu toban sano kadib) iyo kuwii falsafada Faransiiska iyo qoraa Julien Benda waxay ka hor yimaadeen aragtidooda ku saabsan meesha caqliga ee Magaalada.
Kuwa dhaxalka kuwa ugu horeeya, ee iska cad, "caqliga dabiiciga ah" waa tixraaca. Xirfaddiisu waa inay noqotaa midda ugu horreeya, oo ay ka mid noqdaan dadka badan, si loo guursado halganka waqtigiisa. Kuwa dhaxalka leh qoraaga of Khayaanada culimada, dhanka ka soo horjeedka, caqligu waa kombuyuutar, dhakhtar qori, aqoonyahan. Waa iyada oo laga fogeeyo fikirka halganka inuu naftiisa ka ilaaliyo damacyada wakhtiga, oo u adeegi karo runta runta.
Fikrad ahaan uguyaraan, labada jago waa kuwo la aqbali karo, xadka udhaxeeyana had iyo jeer ma aha mid biyo la'aantu ku jirto. Si kastaba ha noqotee, taariikhda, indheergaradka ayaa had iyo jeer sheegta mid ama mid ka mid ah jihooyinka.
Afrikada, ilaa xornimada, waxgaradka bey'adda gacanta ku hayeen gacanta sare. Inaad noqoto qof waxgarad ah wuxuu ahaa inaad lajirto dadka oo aad iska caabiso dulmiga gumaysiga. Caabidani waxay inta badan qaadatay qaab qoraal ama hadal. Laakiin kuwan laftooda waligood dhammaad ma laha. Waxay diyaariyeen ama u iftiimiyeen ficilka.
Madaxbannaanida ayaa cillad ka dhigtay; dulmigii gumaysiga waxaa lagu beddelay dulmiga dhinacyada keliya, oo qaarkood ay hagteen tiro-koobyadii hore ee dhaqdhaqaaqa gumeysiga. Qaaradda oo dhan, qorayaasha, aqoonyahannada, iyo suxufiyiinta ayaa mar labaad ka jawaabaya baaqii taariikhda. Iyaga, sidoo kale, fikradaha ayaa ka sarreeyay dhammaan waxyaalaha halganka siyaasadeed ee degdegga ah.
Dhismaha gidaarka Berlin iyo furitaanka qaabab dimoqraadiyadeed ee qaaradda Afrika in 1990 sano calaamadeeyay meel loo leexdo. Rajada rajo ee ka socota Bariga ayaa qabsatay qaaradda, oo qayb ka mid ah heerka fasalkiisa aqooneed uu umuuqday inuu soo gabagabeeyey, oo uu la socdo saynisyahanka siyaasadeed ee Mareykanka Francis Fukuyama, "dhamaadka taariikhda." "Dimuqraadiyad" waxay ku keeni doontaa xornimo iyo barwaaqo qaarad idil. Markaa tirada jaantusyada cilmiga dabiiciga ah ayaa si tartiib tartiib ah loo tirtiray iyadoo laga doorbiday midka qora.
Guushii ay ka gaadhay bulshada suuqa, adduun-weynaha iyo kacaankii teknolojiyada ayaa sii xoojiyay dhaqdhaqaaqa oo joojiyay fikradda ah in sheekadu si fiican u dhammaatay. La yaab maahan, hadalka caqliga (Afka Faransiiska ku hadla ee Afrika) wuxuu si tartiib tartiib ah u lumiyay tamartii kacaanka. Waxay noqotay fikrad iyo is waafajin.
Waxaan u baahanahay dad aan rumeysan karin oo keliya waddan xoog leh, sharaf leh, oo barwaaqo leh Afrika laakiin sidoo kale ku dhaji fikradan
Natiijooyinka ayaa mararka qaar ah wax la yaab leh: halka xoogagga argaggixisada ay khatar gelinayaan jiritaanka dhammaan gobollada Afrika, xoogagga isku-dhafka ah ee saboolnimada ba'an, gaar ahaan magaalooyinka sare iyo aagagga miyiga ah, oo leh cadaadis juqraafi, isbedelka cimilada iyo maamul xumo ayaa soo jiidata mustaqbal Afrikaan ah, oo ah su'aasha ah Ku soo laabashada hoyga farshaxan ee la boobey awoodoodi hore ee gumaystaha, "gumaysiga" ama siyaasadihii socdaalka ee reer galbeedka ayaa ah udub dhexaadka khudbadaha caqliga Afrika.
Ubaahan iska hor imaad
Tani waxay ina tusineysaa awooda astaan ​​u noqota qurbo-joogta Afrikaanka ah ee reer Galbeedka, oo aqoonsigooda sharciga ah iyo is-dhexgalka ay la xiriirto abaabulidda waxgaradka oo dood guud ka dhalisay Afrika. Laakiin sidoo kale waxay noo sheegaysaa in kasta oo musiibada taariikhdu ka badan tahay weligeed dhaqdhaqaaqa ay naxdin gelineyso, oo aad uga fog tahay khudbad inta badan saameyn ku yeeleysa niyad wanaaga mabda'a, dhowr aqoonyahanno Afrikaan ah ayaa u maleynaya in Afrika ay mar horeba lumisay; in ay taariikh uga tagtay; in kaliya "midnimo" ama "bini-aadamnimada" ee waddamada waa weyn, oo dad badani aad ugu baaqaan ay badbaadin karaan.
Hase yeeshe waa qatar aamin ah in samafalnimadaani, ee Benda ay u maleyneyso in "loogu dhaleeceeyo hoos u dhac xagga akhlaaqda ah; aad ugafiican sidii dib udhaca aqooneed, "oo aan waligeed ahayn magaca kale ee daciifnimada, kuma filna in kor loogu qaado qaaraddaan, kumana uusan soo bixin imaatinka bulshooyinka kale.
Waqtigan xaadirka ah jahwareerka weyn ee heerka caalamiga ah, Afrika, oo ay kujiraan qatarta ugu weyn, ayaa in ka badan weligeed u baahan "la dagaallan" waxgaradka: dadka aan rumeysan karin oo keliya Afrika xoog leh, sharaf leh. , barwaaqo ah, laakiin si loo difaaco, si loo muujiyo iyo haddii loo baahdo lagu rakibo fikirkaas. Xitaa iyo gaar ahaan qiimaha iskahorimaadka asxaabtooda ...
Wilfried Ekanga wuxuu ku dhacay shiraaca ka dib markii uu baahiyay nacayb qabiileed
Fortune: Cristiano Ronaldo, kubada cagta ugu qanisan adduunka ee 2019; Waa tan inta maalkiisa
Hindiya: Hal Beer Ayaa La Qabtay Iyo 15 Kuwa Kale Ayaa Lagu Helay Shaam, UP UP for Stubble | Wararka Hindiya
Wasakheynta Saliida: satalaytka, waxyaabaha caarada ka ah Yurub - VIDEO
AM XIDHIIDHKA FARSAMADA: Maalgashiga la hubo ee Samuel ETO'O ... - VIDEO
Video dheeraad ah3,592